Faa'iidooyinka Orodka: Wax Kasta Ka Baro Orodka | Ragga Stylish
Qaarkood waxay u isticmaalaan inay lumiyaan kalooriyada, kuwa kale si ay u horumariyaan waxqabadka, kuwa kale inay si fudud u qaabeeyaan ama u yeeshaan asal dheeraad ah ama caabbinta hawada. Waxaan ka hadlaynaa orod. Dhaqdhaqaaq aad u fudud sida orodka wuxuu yeelan karaa faa'iidooyin caafimaad oo badan. Waxaa jira dad u tixgeliya inay tahay ciyaar ama waxqabad aad u xiiso badan. Sababtaas awgeed, maadaama ay tahay wax qof kastaa sameeyey waqti nolosha ka mid ah, waxaannu diiradda saari doonnaa maqaalka faa iidooyinka orodka.
Haddii aad rabto inaad ogaato wanaagga oo dhan ee orodku kuu keeni karo caafimaadkaaga, kani waa boostadaada.
1 Isboorti u ordaya
2 Faa'iidooyinka orodka
2.1 Si fudud, raqiis ah oo la heli karo
2.2 Waxay hagaajisaa xaalada jireed
2.3 Caafimaadka wadnaha
2.4 Siideynta endorphins
2.5 Diiqada diiqada
2.6 Waxay ka caawisaa xakameynta miisaanka
2.7 Caawi inaad nasato
Isboorti u ordaya
Inta badan dhaqdhaqaaqa jireed waxay leeyihiin faa'iidooyin caafimaad. Waana midda aadanuhu u samayn qaab nololeedka deggan. Dabeecad ahaan waxaan u baahanahay inaan ku jirno xaalad jireed oo wanaagsan si aan u awoodno inaan ugaarsano, awood u leenahay inaan wax beero ama aado marin biyoodka kuugu dhow si aan u helno sahay. Uguyaraan tani waxay ahayd taariikhi hore iyo inta badan taariikhda aadanaha. Si kastaba ha noqotee, horumarinta tiknoolajiyada qarnigii XNUMXaad iyo XNUMXaad, waxaan isku aragnaa xilligii cudurka faafa ee buurnida iyo qaab nololeedka fadhiidka ah.
Waxaan noqonay kuwa aad u raaxeysan oo uma baahnin inaan dhaqaaqno ama aan sameyno jimicsi nooc kasta ah si aan ugu noolaano maalinteenna maalin. Shaqooyin badan ayaa gebi ahaanba fadhiya, sida shaqaalaha xafiiska caadiga ah. Waxaan saacado badan ku qaadaneynaa telefishanka hortiisa, gaariga dhexdiisa, fadhiisiga, jiifka, iwm. Orodku waa hawl jimicsi oo faa iidooyin badan u leh jidhkeena. Aynu ka fikirno sida aad u jeceshahay inaad u ordo oo aad u sameyso maalin kasta ama ku dhowaad maalin kasta. Xaqiiqdii, waqti yar gudahood waxaad ku ogaan doontaa faa'iidooyinka hawshan iyo faa'iidooyinka caafimaad.
Muhiim maahan inaad socodsiiso maaratoon markaad u baxdo inaad xoogaa isboorti ah sameyso. Si kastaba ha noqotee, waad kala beddeli kartaa noocyada kala duwan ee dhaqdhaqaaqa wadnaha iyo xididdada si loo hagaajiyo jirdhiskaaga iyo caafimaadkaaga muddada dheer. Waxaa jira habab jimicsi oo dhowr ah oo aan ka helno LISS (kaadi xoog leh), MISS (jimicsi xoog leh oo dhexdhexaad ah) iyo HIIT (jimicsi xoog leh). LISS waxay noqon kartaa mid si buuxda u socon kara. Socodku waa wax aad u fudud oo aan maalin walba qaban karno. Si aad roodhida u aaddid, aan lugaynno saaxiibbadeen ama saaxiibkeen ama si fudud ugu soo lugayn xaafaddayada. Waxay naga caawinaysaa inaan gubno kalooriyada oo aan caafimaad qabno.
Dhinaca kale, waxaa jira HIIT. Wadnahan xoogan ee wadnaha ah wuxuu shaqeeyaa mudo gaaban (caadi ahaan qiyaastii 15-20 daqiiqo) waxayna naga caawineysaa hagaajinta adkeysiga. Waxay yeelan kartaa xoogaa saamayn togan iyo mid taban, laakiin wanaagsani way badanyihiin. Midka aan diirada saari doono waa MISS cardio.
Orodka waxaa loo tixgeliyaa jacayl xoog leh oo dhexdhexaad ah. Waxaan ka hadlaynaa orodka xawaare dhan 10 km / h celcelis ahaan qiyaastii. Ku orodku sidoo kale wuu shaqeeyaa ama xitaa socodsiin bareeg ah. Waxaan falanqeyn doonaa noocyada kala duwan ee faa'iidooyinka orodka:
Si fudud, raqiis ah oo la heli karo
Orodku waa tayo asal ah oo aadamuhu leeyahay. Markaan bilaabayno socodka waxaan diyaar u nahay inaan ordno, xitaa haddii ay tahay dhowr inji. Markaan korayno oo aan horumarinayno waxaan barannaa inaan bilowno orod, orod u yeelno ama u kordhinno xoogga xoogaa yar.
In kasta oo orodku aad ufudud yahay, waa inaad ogaataa tilmaamo qaarkood oo kaa caawin doona inaadan naftaada dhaawicin. Tusaale ahaan, xulashada kabo wanaagsan ama aan dhaawicin kala-goysyada.
Waxay hagaajisaa xaalada jireed
Orodku wuxuu naga caawinayaa inaan horumarinno xaaladdeena jireed. Gaar ahaan, waxay hagaajinaysaa xaddiga oksijiinta ugu badan ee aan heli karno. Halbeegga VO2MAX wuxuu noo sheegayaa sida hufan ee aan u isticmaaleyno oksijiinta. Markay sare u kacdo tilmaamahan, waxay macnaheedu noqon doontaa inaan leenahay waxqabad wanaagsan. Maalmahan, inaad yeelato VO2MAX ka hooseeya ayaa ah tilmaame inaad ku xanuunsan karto cuduro iyo cuduro sida sonkorowga iyo waraabka wadnaha.
Orodku wuxuu hagaajiyaa adkeysiga aerobicka iyo sidaas darteed wuxuu ilaaliyaa nidaamkayaga wadnaha. Waxay yareysaa cadaadiska dhiigga waxayna kordhisaa dabacsanaanta halbawlayaasha dhiigga iyo xididdada dhiigga si ay u ballaadhiyaan uguna fooraraan si hufan. Ku haynta qalbigeena xaalada ugu fiican waa lagama maarmaan si aan ugu raaxeysano caafimaad wanaagsan. Ku orodka labadaba wadada iyo mashiinka lagu jimicsado ee jimicsiga labaduba waa xulashooyin wanaagsan.
Waxa jira dad badan oo kuu sheegi doona in orodku ka farxinayo iyaga. Isagu wuu saxanyahay, markaad ordaysid, endorphins ayaa la siidaayaa oo soosaara dareen wanaagsan kadib markuu ordo. Waxyaabahani waxay saameyn ku yeelanayaan yareynta aragtida xanuunka iyo dareenka degganaanta iyo ladnaanta.
Maanta, xawaaraha nolosha badan ee aan ku jirno, culeysku waa wax dad badan ku dhex jira. Mid ka mid ah daaweynta ugufiican ee looga baxsado xaalad kasta oo xiisad, walaac ama cabsi socota. Waad hagaajin kartaa dareenka haddii aad bannaanka kula oroddo qorraxda. Soo-gaadhista qorraxdu waxay kaa caawineysaa isku-dubaridka fitamiin D iyo saameynta niyaddaada.
Waxay ka caawisaa xakameynta miisaanka
Orodku wuxuu gubaa kalooriyo badan. Haddii aadan ka mid ahayn kuwa xakameynaya waxaad cunayso maalin kasta, orodka ayaa kaa caawin doona inaad kordhiso kharashka kalooriga oo aad iska ilaaliso culeyska. Dabcan, cudurdaarka maahmaahda ah "Anigu hadda waan is qurxiyaa haddana waan ordi doonaa oo waan gubayaa" ma shaqeynayo. Kaloriyeyaasha aan gubeyno ee socda waxay aad uga yar yihiin kuwa aan ku cunno wax kasta oo cunto ah.
Haddii aad leedahay nooc kale oo tababar ah sida hypertrophy, orodka ayaa laga yaabaa inuusan gebi ahaanba faa'iido lahayn, maadaama waxaa jira noocyo kale oo la qabsasho ah oo kala goyn kara kuwa aan u baahannahay si aan u helno murqaha.
Caawi inaad nasato
Kuwa aan si fiican u seexan ama aan si fiican u nasan, orodku kaliya kaa caawin maayo inaad gubto xoogaa kalooriyeyaal dheeraad ah, laakiin waxay kaa caawin doontaa inaad daasho oo aad daasho. Sidan, markaad seexanaysid, Waqti badan kugu qaadan mayso inaad seexato oo aad si fiican u nasato.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkaan aad sifiican u ogaan karto waxa faaidada orodku leedahay oo aad ku dabakhi karto nolol maalmeedkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Faa'iidooyinka orodka